ရန်ကုန်မြို့ ဝေဘာဂီဆေးရုံ နှင့် ဖောင်ကြီးဆေးရုံတို့မှ ICU ပုံရိပ်များ - Yangon Nation News
ရန်ကုန်မြို့ ဝေဘာဂီဆေးရုံ နှင့် ဖောင်ကြီးဆေးရုံတို့မှ ICU ပုံရိပ်များ
မြန်မာပြည် ရန်ကုန်မြို့ ဝေဘာဂီဆေးရုံ နှင့်
ဖောင်ကြီးဆေးရုံတို့မှ ICU ပုံရိပ်များ။
ICU မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြတဲ့ ဆရာဝန် သူနာပြု
နှင့် ကျန်းမာရေးလုပ်သား အားလုံကို ချီးကျူး ဂုဏ်ပြုရအောင်ပါ။
ICU -1 ရဲ.ညနေခင်းတိုက်ပွဲ
Prof U Mya Soe Team
ICUကို လူနာ ၄ယောက်တစ်ပြိုင်ထဲနီးပါးရောက်
ကိုယ်က ICU2က ဆိုတော. အပြင်က ကူသူ
လက်မထောင်နေလို. ဓါတ်ပုံရိုက်လို.ထောင်ပြတယ်မထင်နဲ. အပြင်က Microphone နဲ.ပြောတာ နားလည်တယ် လုပ်ပြီးပြီ အိုကေတယ်ပြောတာပါ
အတွငိးကလိုချင်တာတောင်းဖို. ခလုတ်လာနှိပ်ရင်လဲ မိုက်ကလေးပွင့်ပါတယ်။
လူနာနဲ.အတူပါလာတဲ.Chart ကစာရွက်ကလေးမှန်မှာလာကပ်ပြရင် လူနာ Data အမြန်ကူးပေးရပါတယ်။ ဘယ်လောက်စုံအောင်ယူသွားသွား မစုံဘူးနော် ။လိုတဲ.ဆေးအပြင်ကထပ်ဖျော်ပေး စာလုံပြူးအောင်ရေးလဲဖတ်မရလို. Colour code ပါတပ်ပေးရတယ်။
အထဲမှာဆေးတွေထားပေမဲ.လူမအားသလိုအထပ်ထပ်ဝတ်ထားတော.ပုလင်းဖတ်ရဖျော်ရစာကပ်ရအချိန်ပိုကြာပါတယ် ။နားကျပ်နားထောင်ဖို. နားပေါက်မရှိသလို သူ. Pluse လေးကို နေရာစုံမှာလက်အိတ်ထူအောက်ကစမ်းကျင့်ရနေပါပြီ။
Patient restless ဖြစ်သလောက် ကိုယ်တည်ငြိမ်ဖို.လိုပါတယ်နော် ။ရှိသမျစက်ကိုင်တွယ်တတ်ရမယ်ဘယ်သူလာပါအုံးခေါ်မရပါဘူးနော်။ဖြစ်နိုင်ရင်တော.မကူးအောင်နေကြပါ။ကူးပြီးတကွဲတပြားကုသခံရချိန်အိမ်သားချင်းဓါတ်ပုံလေးရိုက်ပေးပါဖုန်းဆက်ကြတယ် အထဲကို ဖုန်းယူမသွားရပါဘူးနော်။မှန်အပြင်ကလူကဘဲလှမ်းရိုက်ပေးတာမို. အဝေးရိုက်ဘဲပေးနိုင်ပါတယ်။
Health Person တွေကိုသနားစေချင်လို.ပြောတာလုံးဝမဟုတ်သလိုယုံတမ်းစကားတွေနံ.ခြောက်နေတာလဲမဟုတ်ပါလူနာတွေဒုက္ခကိုမှန်းကြည့်စေချင်တာ။ကိုယ့်အမအရွယ်အကိုအရွယ်အမေအရွယ်တွေ ထိသလိုကိုယ့်ထက်ငယ်တာတွေလဲအသက်မနည်းရှူနေကြရတယ်။
ကုသ ပေး နေတဲ့ သူတွေ လည်း ဘေး ကင်း ကြ ပါ စေ.။
လမ်း ပေါ် ထွက် နေရတဲ့
သူ တွေ ဂရု စိုက် စေ ချင်ပါတယ် ။
ဓါတ်ပုံများကို လက်ရှိ ICU တွင်
အမ Prof ခင်မိုးဖြူ
ဆရာ Prof ဘုန်းမြင့်
ဒေါက်တာဇာလီငြိမ်း တို့ထံမှ ကူးယူးဖော်ပြပါသည်။
တာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြသော ကျန်းမာရေဝန်ထမ်း အားလုံအားရှိကြရအောင် များများသာ ချီးကျူးဂုဏ်ပြုပေးကြပါဗျာ။
ပြင်ဦးလွင်မြို့နယ်တွင် ထိန်းချုပ်ဓာတုပစ္စည်းများ ဖမ်းဆီးရမိ
၁၈ ရက်နေ့၊ မနက် ၈ နာရီ ထိ COVID-19 လူနာသစ် (၂၅၆) ဦးတွေ့ရှိ၊ ၁ဦးထပ်မံသေဆုံးရာ သေဆုံးသူပေါင်း (၆၁)ဦး ရှိပြီဖြစ်